Ducadii Weyne. ? Ilaalinta & Daabacaadda | + Awood badan
Ducada MucjisadaXaaladaha qaarkood oo sidoo kale loogu yeedho, Salaadda Weynu waa mid ka badan salaadda, gabay ay tiriyey Maryantii bikradda lafteeda oo weyneheeda iyo weynaanteeda Ilaaha Qaadirka ah.
Maryantii bikradda ahayd, hooyadii Rabbigeenna Ciise Masiix, waxay goob joog u ahayd xoogga iyo mucjisooyinka Eebbe laftiisa markii ay uur lahayd shaqada iyo nimcada Ruuxa Quduuska ah ee Ilaah, waxaan ku aragnaa tan buugaagta xurmada leh.
Ahaanshaha hooyada Ciise waxay noqotay hooyada dhamaan kuwa rumeysan caqiidada masiixiga, waa tan sababta salaaddan qaaska ahi ay muhiim ugu tahay dadka Masiixiyiinta ah.
1 Ducada Asalka Asalka
2 Salaadda Weyn ee Magangalyada La'aanta
2.1 Ducada si loo daabaco
2.2 Waa maxay salaadda Cibaadada?
2.3 Waa maxay asalka salaaddan ee bikradda?
2.4 Goormaan tukanayaa?
Ducada Asalka Asalka
Naftaydoy, Rabbiga ammaan, Oo ruuxaygiina aad iyo aad buu ugu farxaa, Markii aan ka fiirsado wanaagga Ilaahay oo ah Badbaadiyahayga.
Sababtoo ah wuxuu eegay addoonkaaga is-hoosaysiinta ee sabtidiisa oo arag sababta halkan maxaa yeelay waxay iga farxin doonaan farxad iyo raynrayn tan iyo qarniyada oo dhan.
Maxaa yeelay, wuxuu hortayda ku sameeyey waxyaalo waaweyn oo yaab leh, Waa Kan Qaadirka ah oo magiciisu aad iyo aad u quduuska ah, naxariistiisuna way sii waartaa tan iyo ab ka ab, Kuwa isaga ka cabsada oo dhan.
Wuxuu kor u taagay gacantii xooggiisa, oo wuxuu kala fogeeyey kibirkii kuwa kibirka leh, oo wuxuu ka xanaajiyey naqshadiisii.
Wuxuu xoogsaday kuwii xoogga badnaa, wuuna sarraysiiyay kuwa kibra.
Wuxuu kuwa baahan ka buuxiyey alaab iyo maal taajir ah oo uu kaga tegey waxba la'aan.
Addoonkiisii ​​reer binu Israa'iil ayuu kor u qaaday, Oo wuxuu soo xusuustay naxariistiisii ​​weynayd iyo wanaaggiisii.
Siduu ballanqaaday aabbeheen Ibraahim iyo farcankiisii ​​weligiis iyo weligiisba.
Ducada asalka Magnificat ama Magnificat waa mid awood leh waxaana la sameyn karaa waqti kasta ama xaalad kasto.
Waxaa jira kuwa ku soo qaatay mucjisooyin qurux badan salaadda dhexdeeda, midda ku dhacda inta badan waa korodhka iimaanka, tani waa mucjiso deg deg ah oo aan nafteena ku dhex dareemi karno.
Jumladdan waxaa lagu samayn karaa luqadda asalka ah ee Laatiinka, ama tarjumaadaha kala duwan ee luqad kasta ah.
Salaadda Weyn ee Magangalyada La'aanta
Magnificat anima macnaheedu waa Dominum,
et exultavit ruuxa ku jira Deo salutari meo,
Ecce enim ex hoc beatam oo aniga iiga waran jiilka om,
yaa feeraya mangna oo soosaaraya est,
et sacum nomen eius,
et al-eius ad progenies timentibus eum.
Fecit potentiam oo ku taal brachio suo,
kala firdhiso superbos maskax cordis sui,
xarun awood badan oo siidaynta,
ergooyinku waxay xukumaan Bonis,
et qaybinta ayaa yareynaysa inanes.
Jooji Israel puerum suum recatus misericordiae suae,
Aaladaha awoodda si loo bixiyo ilaalinta nafteena, qoyska, asxaabta ama alaabada sida guryaha, ganacsiga ama gawaarida.
Ducada iimaanka ka buuxo waxay noqotaa nidaamkayaga amniga ee ugu fiican oo ka dhan ah wax kasta oo xun oo aan doonayno inaan weerarno.
Way adagtahay in la cabbiro awooda ee salaadda Maaddaama taasi ay kuxirantahay iimaanka la geliyay, sidaa darteed waxaan ognahay in maaddada ka dhigi doonta baryada inay si hufan u shaqeyso waa in la aamino.
Ducada si loo daabaco
Waan ognahay sida ay muhiimka u tahay in salaadda marwalba la helo.
Taasi waa sababta uu u leeyahay ducada hoos ku qoran si uu u daabaco. Waad daabacan kartaa si aad ugu ducayso markasta iyo meesha aad rabto.
Waa maxay salaadda Cibaadada?
Bilowgii weedhan waxaa la sameeyay iyada oo ujeedadu ahayd Sheeg weynaanta Ilaah adoo u oggolaanaya Maryan inay badbaadiyaha dunida u keento.
Waqtigan xaadirka ah tukashadan wali waxaa loo sameeyay mahadnaqa Ilaah ee uu naga badbaadiyay daqiiqado adag, mucjisooyin uu helay iyo calaamado kale oo mahadnaq ah oo aan shakhsi ahaan u yeelan karno.
Hees loo adeegsankaro badbaadin, saaxirada, caawimaad, raaxo, iimaan iyo mucjisooyin yaab leh.
Sida salaad kasta way awood badan tahay waana la abuuray si aan ugu adeegsano waqtiyada aan sida ugu badan ugu baahan nahay.
Waa maxay asalka salaaddan ee bikradda?
Salaad ama gabay dhiirigeliyey isla ilaahay oo aan si fudud ugaga heli karno kutubta xurmada leh, gaar ahaan kitaabka Injiilka Sida ku xusan Saint Luke cutubka 1aad, aayadaha 26 illaa 25.
Qoraal ka buuxa mahadnaqa Eebbe iyo halka ay Maryantii bikradda ahayd baa aqoonsan weynaanta iyo awoodda Ilaah aabaha.
Jumlad Baybalka ah oo ay Maryan ina barayso in mahadnaqa Eebbe aan la waayayn karin, iyadoo ducadan weyn aan u baran karno in hababka Ilaahay, xitaa haddii aanan fahmin, ay had iyo jeer u keenaan barakeysan nolosheena.
Sidoo kale Maryan oo sugaysay inay guursato oo ay ku dhammaatay uur iyada oo ku shaqeyneysa oo ay ku mahadsan tahay Ruuxa Quduuska ah, xaalad adag oo ay ku ogaatay sida ay ula kulanto mas'uuliyadda iyo xigmadda si ay Badbaadiyeyaasha ugu keento dunida.
Ma jiro maalin ama waqti lagu tukado.
Waa inaad tukataa markaad iimaanka iyo doonistaada tahay. Waqtigu wax macno ah ma leh, waxa ugu muhiimsani waa in la rumeeyo awoodda ducada.
Had iyo jeer rumayso awoodaha bikradda. Taasi waa tan ugu muhiimsan.
Ka faa’iideyso xoogga ducada salaadda Eebbe. Runtii way awood badan tahay!